galmada kursiga oo geedka sifiican u gaaro | shumis.net
Home » galmada » galmada kursiga oo geedka sifiican u gaaro
galmada kursiga oo geedka sifiican u gaaro
Bigrada gabadha waa shayga ugu muhimsan oo tilmaamaya dhowrsanaanteeda, xuubka bekrada waxa dusha ka dahaara bushimaha yaryar ee cambarka. Xuubkaasi oo dillaaca habeenka gabadha la bekra-jebinayo, wuxuu yeeshaa kolka uu dillaaco faraqyo ama raaman, waana la dareemi karaa jiritaanka raamankaasi ilaa laga gaaro dhalmada koowaad kolkaasi oo uu si toos ah u baaba’ayo.
Dillaaca xuubka bekrada waxa la socda dhiig bax heerar kala duwan leh. Waxa laga yaabaa in xuubku uu aad u adag yahay, hor istaagana galmada, ama yahay sida laastiigga oo kale oo uusanba galmo ku dillaacin, balse goor dambe dhalmadu ay dillaaciso. Waxa dhacda in mararka qaar afka xuubka bekradu uu yahay mid tooxan oo uusan koobaabnayn, mararka qaarna waaba uu dahaaran yahay oo maba laha xitaa meel uu dhiigga caadadu kasoo baxo, taasi oo kallifta in dhakhtar loogu yeero.
Waxaan markasta ku dadaaleeynaan in aan u soo tabin akhristayaasheena iyo daawadayaasheena sharata mu dan in aan u soo tabino,Hadaa nahay Shabakaga shumis waxa kasta oo nolosha ku taxaluqa anagoo ka eegeyba hadba sida ay xasaasi u kala yihiin u muuruhu, Haddab Dhaqtaraadaan Ayaa noo shar xeysa Xuubka Bigrada iyo hadba sida uu Dunarka ugu kala xoog badan yahay.
Title: galmada kursiga oo geedka sifiican u gaaro
Posted by Unknown, Published at August 02, 2016 and have 0 comments